2 makore 4 ago #25 by hedupitsbutt
Unobvuma chikwereti OR ATM Cards kuti mipiro?
Kubva zvandiri kunzwisisa, zvinoita sokunge NDINOFANIRA kutuma You mari Via USPS Mail. Ndiri kugadzirisa?
2 makore 4 ago #26 by hedupitsbutt
ikozvino ndine KLAX, It iiswe NYORE! SOoooooo Une mumwe Fan !!!!
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Dariussssss
2 makore 4 ago #28 by rikoooo
Ndinokutendai nokuti shoko renyu, tiri kukubatsira.
Kana uchida kupa mari yezvipo unogona kushandisa maitiro edu pano http://www.rikoooo.com/more/donate
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Gh0stRider203, hedupitsbutt
2 makore 3 ago #80 by Gh0stRider203
hedupitsbutt akanyora: ikozvino ndine KLAX, It iiswe NYORE! SOoooooo Une mumwe Fan !!!!
chenjerera Ungapedzisira akafanana neni ...... Rikoooo muropa hehe
2 makore 3 ago #173 by Gh0stRider203
tinogona kupa mumwe chikamu superskullmaster kuti anatomi kuva hurongwa akafanana Chuka kuti ??? ^ _ ^ (Iye kare vakati vaizoenda kupa chikamu chimwe chete. Ndinokupa mumwe kuva mumwe akafanana naro zvakare lol)
Time chokusika peji: 0.296 mumasekonzi